Madaxa ugu sarreeya UNHCR oo booqasho ku tegay xerada Dhadhaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Madaxa hay’adda Qarammada midoobay u qaabbilsan arrimaha qaxootiga ee UNHCR, Antonio Guters ayaa booqday xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya.
Antonio Guters ayaa Dhadhaab u tagay inuu u kuurgalo xaaladda nololeed ee dadka ku nool xeryahaas iyo sida ay u socdaan hawlaha samafalka.
Mas’ulka ayaa la kulmay madaxda hay’adaha samafalka ee ka hawlgala xeryaha iyo horjoogeyaasha dadka ku nool xeryaha, kuwaas oo ka warbixiyay xaaladda dadka ku nool xeryaha.
Antonio Guters ayaa waxaa socdaalkiisa Dhadhaab ku wehelinayay mas’uuliyiin ka kala tirsan Qarammada midoobay iyo dowladaha Soomaaliya iyo Kenya.
Antonio Guters ayaa dhawaan magaalada Nairobi kula shiray madaxweynaha dalka Kenya, Uhuro Kenyatta, isagoo kala hadlay go’aan ay Kenya horay u qaadatay oo ahaa in muddo 3 bilood ah qaxootiga Soomaalida looga rarayo Kenya.
Xerada qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya oo ah xeryaha qaxooti ee ugu weyn dunida ayaa waxaa ku nool dad tiradooda lagu qiyaasay ku dhawaad Nus-malyuun qof oo u badan Soomaali.